Gwa ma ọ bụ Igosiputa Ntughari | Martech Zone
Abụ m ezigbo onye ofufe nke Tom Peters. Dị ka Seth Chinekein, Tom Peters mụtara nkà nke ịkọrọ ndị doro anya nke ọma. Anaghị m anwa ileda talent ha anya. Achọtala m talent a n'ọtụtụ ndị isi mụ na ya rụkọrọ ọrụ - ha nwere ike iwere okwu dị mgbagwoju anya, ma mee ka ọ dị mfe ka nsogbu na azịza ya wee pụta ìhè nye ndị niile metụtara.
Nke a bụ nnukwu okwu si na Tom Peters clip na Youtube. N'ụzọ na-emegide onwe ya, okwu ndị ahụ abụghị nke Tom, na ọ bụghị Tom zigara clip ahụ, mana ọ dị mfe ma baa uru ịde blọgụ banyere:
Ọ bụrụ na ị gwa mmadụ, ha ga-echefu ya.
Ọ bụrụ na i gosi mmadụ, ha nwere ike icheta.
Ma ọ bụrụ na ị gụnyere ha, ha ga-aghọta.
Ozi dị ukwuu, na nke ị ga-anụrịrị na ndụ gị niile. Ajuju m ga - abia bu olee otu nke a si metuta mgbasa ozi na ahia? M na a na-ozioma banyere ịde blọgụ maka oge, ma nanị tinye… ọ bụ a ọkara na gụnyere ndị mmadụ kama igosi ha ma ọ bụ ịgwa ha. 'Mgbanwe' nke na-ede blọgụ adịghị na ederede na ihuenyo, ọ bụ na ntinye aka nke obodo.
Ejila okwu m maka ya, lee nnukwu edemede sitere na ClickZ nke Pat Coyle zigara m.
Tags: metụtaraLeadershipegosiagwaTom peters